बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी बन्द गर ! - Ratopati
नेपालीहरू देशमा रोजगारीको अभावले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । हालै मात्र वैदेशिक रोजगारीका लागि अफगानिस्तान पुगेका १३ जना नेपालीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । पश्चिमा शक्ति र स्थानीय आतंकवादी तालवानी संगठनको युद्धमा नेपालीहरूको रगत बग्यो । क्यानेडेली दूतावासमा सेक्युरिटि गार्डको काम गर्ने उनीहरू तालीवानीको शिकार बने । अन्य दुई पक्षको विवादको शिकार नेपालीले बन्नुप¥यो । साधारण बस र एउटै रुटिङको आवतजावतले आक्रमण गर्नेहरूलाई सजिलो बनाएको देखिन्छ । तालीवानीको उक्त आत्मघाती बम विस्फोटमा अन्य नेपालीहरू पनि गम्भीर घाइते भएका छन् । यसरी एउटा दूतावासको लापरबाहीका कारण त्यत्रो संख्यामा नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ, जुन कुरा सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि अत्यन्त दुःखद विषय हो । यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको ज्यान गएको यो पहिलो घटना भने होइन । करिब एक दशकभन्दा बढी अवधिअघि पनि इराकमै १२ नेपालीहरूको हत्या भएको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका उनीहरूको घाँटी रेटी निर्मम हत्या भएको थियो । त्यसकारण रोजगारीको लागि असुरक्षित देशहरूमा नेपालीहरू जानुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य होला ? यो अहिले अहम् प्रश्न बनेको छ ।
नेपालमा समय–समयमा राजनीतिक व्यवस्था फेरिँदै आएका छन् । पहिले राणाशासन, त्यसपश्चात् प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल व्यवस्था र अहिले गणतन्त्र । देशमा यत्तिको व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था भने फेरिन सकेको छैन । अझ नेपाल विश्वकै गरिब राष्ट्रको रूपमा चिनिँदै गएको छ । देशमा भ्रष्टाचार वर्षेनी बढेको छ । लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेका छैन भने भएका उद्योग कलकारखानाहरू पनि बन्द हुँदै गएका छन् । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीका लागि जुनसुकै देश जानु नेपालीहरूको बाध्यता बनेको छ । अहिले एक घर एक वैदेशिक रोजगार भन्ने स्थिति आइपुगेको छ । नेपालबाट दैनिक १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू वैदैशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन् । त्यस्तै दैनिक तीन जना नेपालीहरू शव बनेर बाकसमा फर्किने गरेका छन् । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीले नेपालीहरूको पीडामाथि पीडा थप्ने गरेको छ । तर पनि यसको विकल्पको रूपमा देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । त्यसकारण बत्तीमा पुतलीको आकर्षणझैँ थाहा हुँदाहुँदै मृत्युको मुखमा नेपालीहरू हाम्फालिरहेका छन् । हाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि १ सय १० देशहरूमा जान स्वीकृति दिने जनाएको छ । तर विभिन्न प्रलोभनमा फसेर नेपालीहरू विश्वका कुनाकुनामा जस्तोसुकै खतरायुक्त स्थानमा पनि पुगिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण अन्य विभिन्न समस्याहरू पनि थपिएका छन् । पारिवारिक सम्बन्धमा खलल पु¥याएको छ । त्यसकारण देशमा नै रोजगारीको सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा राजनीतिक दल र तिनका मुख्य नेताहरू गम्भीर बन्नुपर्छ । हालको सरकारले देशमा उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भरतातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । तर जबसम्म देशका ऊर्जावान् युवायुवतीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिरहन्छन् तबसम्म देशमा विकासको गति तीव्र पार्छु भन्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र हो । हालै दक्षिण कोरिया जान चाहने युवाहरूको संख्या ६० हजार रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । उनीहरू दक्षिण कोरिया जान नपाए अन्य देश जाने निश्चित नै छ । यस्तो संख्या थुप्रै नै छ । ती युवाहरूलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गरेर काममा लगाउन सक्ने हो भने मात्र देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दछ भने वैदेशिक रोजगारीको पीडा पनि खप्नुपर्दैन । हाल नेपालको जनसंख्यामा काम गर्न सक्ने क्षमता भएका युवाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । यो संख्याको सदुपयोग हुन सके मात्र देशले विकासको गति समात्न सक्छ, सन् २०२२ सम्म विकासशील राष्ट्र हुने सपना साकार हुनसक्छ ।